Phupha ngoncedo Discover Discover Discover Online ▷ ➡️
Unokunceda omnye umntu ngeendlela ezininzi ezahlukeneyo. Oku kungathatha uhlobo lwenkxaso yeemvakalelo kwimeko enzima yobomi okanye ngohlobo loncedo lwezezimali ngamaxesha anzima. Abacimi-mlilo, umzekelo, basindisa ubomi yonke imihla ngokubonelela ngoncedo, ngokulwa umlilo, okanye ngokubakho ngokukhawuleza emva kwengozi.
Ukuba umntu uyanceda kwaye uluncedo, ukhusela kwaye enze okulungileyo, ngokubanzi kwenziwa ngokuzinikela, oko kukuthi, ngaphandle kokulindela nantoni na. Kwabanye, lo ngumsebenzi ovuzwa ngawo. Abongikazi, amagosa asebupoliseni, oogqirha ezibhedlele kunye neeofisi zoogqirha, ukubala nje abambalwa. Kodwa baninzi abantu abavolontiya ukunceda abanye abantu. Nokuba ngexesha lasemva kwemini yabadala kwikhaya lokugcina abantu abadala okanye njengenkxaso kwikhaya lezilwanyana, kuba nalapha uncedo luhlala lungxamisekile.
Yindalo yoluntu ukunceda nokuxhasa abanye, nokuba sikufumanisa kunzima ukukholelwa abanye bexesha lethu. Kodwa enyanisweni, kubonisiwe ukuba isimilo sokuzingca nokuzingca sifundwa kuphela ebomini. Ukuba abantwana bayazingca, kuhlala kungenxa yabantu abadala abayimodeli abenza ngale ndlela kunye nomzekelo wokuziphatha.
Kodwa uphando lwamaphupha lujonga njani uphawu lwephupha? Uthini malunga nephupha xa uphupha lo mfanekiso wephupha?
Ezinye iimeko zephupha zivela ngokunxulumana nomfanekiso wephupha "uncedo" rhoqo kunabanye. Ngoku unokufumana iinyani ezichazayo malunga namaphupha abaluleke kakhulu ngokunceda:
1 Uphawu lwephupha «uncedo»: eyona maphupha aqhelekileyo malunga nesimboli
1.1 Isiganeko ephupheni senza uncedo luyimfuneko.
1.1.1 Xa konke okunye kusilele: iphupha lokunceda ngokuhamba
1.1.2 Nceda ngengozi emaphupheni kwaye ugcine ubomi!
1.2 Isenzo esihle yonke imihla - ukunceda umntu ephupheni
1.3 Ukunceda indoda engenakhaya: lithetha ukuthini iphupha lam?
1.4 Yonke imizamo ililize: ukungakwazi ukunceda njengophawu lokulala
2 Uphawu lwephupha «uncedo» - ukutolikwa ngokubanzi
3 Uphawu lwephupha «uncedo» - ukutolikwa kwengqondo
4 Uphawu lwephupha «uncedo» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «uncedo»: eyona maphupha aqhelekileyo malunga nesimboli
Isiganeko ephupheni senza uncedo luyimfuneko.
Xa konke okunye kusilele: iphupha lokunceda ngokuhamba
Ekutolikeni ngokubanzi kwamaphupha, intshukumo ibonisa utshintsho lwangempela kubomi balo mntu kuthethwa ngaye. Ukuba wena, njengomphuphi, unceda omnye umntu ngokutshintsha indawo yokuhlala kwaye uphathe iibhokisi zekhadibhodi, uxhasa umhlobo osenyongweni okanye ilungu losapho kuphuhliso lwabo. Umntu othile uzabalazela ukufikelela usukelo olutsha ebomini kwaye ubuza umphuphi ngenkxaso, ekufuneka ayinike ngokungazingci. Kuba into oyiphayo idla ngokubuyiselwa kuwe.
Nceda ngengozi emaphupheni kwaye ugcine ubomi!
Ngaba ufumene ingozi ngelixa ulele? I-subconscious yakho emva koko iqhuba ingozi eyenzekileyo okanye ikulumkise ngento ekonzakalisayo. Ukufumana ingozi ephupheni, apho umntu eza kunceda abantu abonzakeleyo okanye izilwanyana, kubonisa amandla okuphupha ukuze aphephe izinto ezimbi ngaye. Umntu ngethuku lemvelo uyakwazi ukubeka indlela yobomi ukoyisa izigaba ezingonwabisiyo zobomi.
Isenzo esihle yonke imihla - ukunceda umntu ephupheni
Ubuninzi beemeko zamaphupha zinokucingwa apho umntu oleleyo encedisa omnye umntu. Umzekelo, ungagcina umntu; Olu phawu luphupha lubonisa ingozi okanye isifo ekufuneka sithintelwe. Zinyamekele kwixa elizayo. Unokunceda omnye umntu ngokubabonisa indlela. Ukuzimasa okunjalo kubonisa uluhlu lwentlalo. Umphuphi uyayiqonda indlela yokujongana nokusingqongileyo.
Ukunceda indoda engenakhaya: lithetha ukuthini iphupha lam?
Abangenamakhaya, nabahlala belala phandle bengakhuselekanga, bayaluxabisa uncedo. Ngolu lwazi kunokwenzeka ukuba umntu alale kwaye amava ephupheni ukuba simnceda njani loo mntu, mhlawumbi simthengela into yokutya okanye sinikela ngokuchitha ubusuku.
Umntu ongenamakhaya ephupheni, ocinga ukuba ungumphambukeli kumntu oleleyo, ufuzisela umntu ophuma kwimeko yomphuphi okhoyo ngokwenene. Umntu unamaxhala nobunzima; i-subconscious iyifumene le fowuni yoncedo Zama ukufumana ukuba ngubani onokumnceda.
Yonke imizamo ililize: ukungakwazi ukunceda njengophawu lokulala
Ukungakwazi ukunceda umntu olalayo ngokubanzi kudala uxinzelelo ephupheni. Nangona la mava ephupha akufuneki ajike abe liphupha elibi, amava anqabile. Ukuba umntu ephupheni ufuna uncedo lokulala ngokungxamisekileyo, kodwa oku akunakunceda kwaye unengxaki yokungabi namandla kwakhe, ikakhulu luxinzelelo lwengqondo, olubonakalisiweyo ngoku. Ngaba ibidinisa mva nje? Phumla uze uphefumle ngokunzulu.
Uphawu lwephupha «uncedo» - ukutolikwa ngokubanzi
Ukuba iphupha liziva ngathi liphupha ngokungathi lifuna uncedo kwaye lide lifune uncedo, ngokokuchazwa ngokubanzi kwephupha, oku kubonisa ukuba uyakufumana uncedo kubomi bokwenyani kwikamva elikufutshane kwaye uza kuphuma kunzima kwaye kunokuba yingozi kuye. nangona kunjalo izakuphuma.
Kwelinye icala, ukuba usebenza ngokunceda omnye umntu, lindela Gracias y umvuzo. Ukuba ufumana uncedo komnye umntu ephupheni, siya kunikwa ithuba lokuvuka ebomini ukuba senze okuhle. Akunyanzelekanga ukuba ibe yimisebenzi emikhulu. Kuba zihlala zizinto ezincinci ezibalwayo. Ke ngoko, umntu kufuneka anike ingqalelo kwabanye abantu, ngokuqinisekileyo kuya kubakho amathuba amaninzi okunceda.
Uphawu lwephupha «uncedo» - ukutolikwa kwengqondo
Ukusuka kwindawo yokujonga ukutolikwa kwengqondo yamaphupha, umfanekiso wephupha "uyanceda" uhlala efuzisela oko umnqweno yokuphupha efunekayo. Mhlawumbi kubomi bokwenyani ungumntu othanda ukucela uncedo kwaye uhlala ekulungele ukunceda. Into ebizwa ngokuba yi "syndrome yoncedo" inokufihlwa emva kwale nto. Uyakuziva uhlonitshwa kwaye uxabisekile kuphela xa ubeka intlalontle yabanye ngaphambi kweyakho kwaye uhlala ukulungele ukungenelela njengomsindisi kwimeko engxamisekileyo.
Ukusuka kwindawo yokujonga kwengqondo, oku kuhlala kufihla into ukuzijongela phantsi yokuphupha. Ukholelwa ukuba unexabiso kuphela kwinto ayibonisayo ngokwenza into entle kwabanye. Kwimeko yamaphupha aphindaphindiweyo oncedo, kubalulekile ukuba ujonge kubume bobuntu bakho kwaye uqwalasele ukuba yeyiphi eyona nto ibangela ukuba unqwenele ukunceda ngonaphakade.
Ukongeza, iphupha apho ufuna ukufikelela kwabanye abantu linokubonisa ukuba akuvumeli ukuba uxhatshazwe ngokholo olulungileyo. Ukuba ungumntu okufumanisa kunzima ukuthi "hayi", kwiimeko ezininzi oku kusetyenziswa yimeko-bume.
Ukuba ukuphupha uyakuqonda ukufana okunjalo ebomini bakho, uya kuba wenza kakuhle ukuba ungasuki utsibe rhoqo xa abanye abantu befuna into, kodwa ucwangcise ngokuchanekileyo ukuba ngubani ofuna uncedo lwakho kwaye uluxabisa. Ungayifumana nembeko ngokungasoloko uthi "ewe no" amen kuyo yonke into, kodwa ngokwenza imida yakho icace kwabo bakungqongileyo.
Uphawu lwephupha «uncedo» - ukutolika kokomoya
Ukujongwa kwinqanaba lokomoya, ukutolikwa kwephupha ubona "uncedo" kwisimboli yephupha. umthamo yamaphupha, yokujongana nokungaphumeleli kobomi kwaye ube nakho ukujongana nawo ngokwawo.
Ngaba uziva njalo? umhlaba womoya Idityaniswe ngokuqinileyo, inxenye yomsebenzi wobomi bakho inokuba kukukhapha abanye abantu kwindlela yabo ebomini kwaye ubancede baphuhlise ukuqonda okukhulu kwenqanaba lokomoya lokuba.